Kedu mgbe aga-emeghe okporo ụzọ okporo ụzọ Samsun Sivas? | RayHaber
HomeTurkeyBlack Sea Region55 SamsunKedu mgbe aga-emeghe okporo ụzọ okporo ụzọ Samsun Sivas?
29 / 09 / 2019 55 Samsun, 58 Sivas, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Black Sea Region, Isi akụkọ, Turkey
samsun sivas okporo ụzọ ga-emeghe mgbe
Mgbe a ga-emeghe ụzọ Zamun Sivas Railway?: Mgbe emechiri ụzọ Zamun Sivas Railway taa, e mechiri 4 maka agwọ ahụ n'ihi ọrụ mmegharị ahụ. N’ikpeazụ, a matara na ọrụ ahụ ga-aga n’ihu n’Ọgọstụ, ọ ga-aga n’ihu.
29 Na Septemba 2015, Samsun-Sivas-Kalın okporo ụzọ ụgbọ mmiri, nke emechiri emechi maka njem n'ime oke nke ọrụ mmezi a ga-etinye n'ọrụ mgbe afọ atọ gasịrị, emepebeghị n'agbanyeghị afọ 4 na-etinye aka. Na 88 kwa afọ Samsun-Sivas Kalın okporo ụzọ, nke Mustafa Kemal Atatürk mepere, ọrụ mmegharị ahụ malitere site na nkwado nke European Union (EU) ka na-aga n'ihu. Amabeghị mgbe edobere eriri ahụ akara na njedebe nke Ọgọstụ.
EGO NA EGO EU
4 kwadebere oru ngo ohuru maka uzo Samsun-Kalın Railway site na nkwado nke ego onyinye EU. Site na oru ngo a, akụrụngwa nke ụzọ ụgbọ okporo ụzọ dị obosara obosara nke 6.70 mita, yana mmelite ala n'okporo ụzọ nke àkwà 38 mebiri emebi ma na-eme ka ọ dị ọhụrụ. E weghachiri akwa akụkọ ihe mere eme nke 40 ma gbanwee okporo ụzọ ụgbọ mmiri, onye na-ehi ụra, ballast, na skis nke usoro ahụ, nke a na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'ime ọwara mmiri 2 puku 476.
AKWIGNKWỌ MAKA EGO
A na-emegharị nlọgharị njem nke ụgbọ na ụgbọ elu iji nye ndị nwere nkwarụ njem. Ejikwara aka na ụlọ ọrụ telivishọn kwekọrọ na ụkpụrụ EU. A gbanwere usoro ntụgharị 121 ma mechie ọnụ ụzọ ahụ n'ime sistemụ ahụ na mgbochi mgbochi.
Aga aga ije na AUGUST
265 nde euronke oru ngo a 148.6 nde euroEgo ego nke EU nyere aka. Usoro nnwale na inye ọrụ na-aga n'ihu ma atọọ ịhaghachi na ngwụcha August, agaghị ekwupụta ọrụ ahụ mgbe ọ ga-eme. Lainụ Samsun-Sivas Kalın, otu n'ime ụzọ ụgbọ abụọ nke Oké Osimiri Ojii ruo Anatolia, ga-ebufe ọdụ ụgbọ mmiri na mpaghara ahụ yana ndị njem. (Samsuncanlıhab bụ)
Mgbe ịmepee Samsun-Kalın Railway Line?
Kọmitii Nnabata nwa oge Samsun Sivas Ra…
Ngwongwo okporo ụzọ nke Ankara-Sivas mepee mgbe
Akara YHT Ankara-Sivas mepee mgbe ọrụ
Samsun-Sivas Railway Line na-emeghe na 2019
Emeghe okporo ụzọ Samsun-Sivas na njedebe nke 2018
A ga-emeghe Samsun-Sivas okporo ụzọ na September
Kedu mgbe Samsun Ankara High Speed ​​Line ga-amalite ọrụ?
Zamun-Sivas Railway Line Modernization…
Apaydın, Samsun-Sivas Railway Line Hatt
Ntughari uzo ugbua na Samsun-Sivas nke ntanetị
Zamun Sivas Railway Line Mgbe aga-emeghe
Lineun Railway Samsun Sivas
Samsun Sivas Nnukwu okporo ụzọ